Usejoyine iqembu laseKapa umdlali wePirates | News24
Usejoyine iqembu laseKapa umdlali wePirates
Cape Town – I-Ajax Cape Town isikuqinisekisile ukuthi isisayine umdlali wasemuva, uTercious Malepe, ngesivumelwano sokubolekisa sesizini evela ezinkunzini zaseSoweto, i-Orlando Pirates.
UMalepe ungumdlali weBafana Bafana njengoba eseke wamela iNingizimu Afrika emidlalweni yomqhudelwano we-COSAFA Cup wangonyaka ka-2016 kanye no-2017.
Uphinde waba yingxenye yesikwati ebesiqeqeshwa umqeqeshi uStuart Baxter sokuhlungela imidlalo ye-2018 African Nations Championship, kanye nozakwabo omusha kwi-Ajax, uMasilake Phohlongo kanye noRoscoe Pietersen.
OLUNYE UDABA: Ifu elimnyama eNaturena kudlula emhlabeni omunye wabaqeqesha iChiefs
Ngaphezu kwalokho, lo mdlali oneminyaka engu-20 ubudala usekhombise ukuba nekhono lokuhola njengoba eseke waba ngukaputeni weqembu lika-U20 kanye no-U23 kumqhudelwano we-U20 Africa Cup of Nations kanjalo nakumqhudelwano wabancane we-World Cup eSouth Korea ngaphambilini ngo-2017.
Lo mdlali waqala kanye nozakwabo odlala emuva kwesobunxele, uRivaldo Coetzee, kumqhudelwano wemidlalo yama-Summer Olympic eBrazil ngonyaka odlule. Ngesikhathi esekuma-Sea Robbers, lesi sitobha sahluleka ukuthola isikimu eqenjini elikhulu kanti sichithe isikhathi esiningi sidlala ibhola kwi-MultiChoice Diski Challenge.
Kodwa-ke, ukuya kwaso kwi-Ajax kubukeka kuzosinika ithuba lokuthi sidlale eqenjini elikhulu.
UMalepe kungenzeka ukuthi adlale uma ngabe i-Ajax isibhekene neBucs emdlalweni wePremiership.